Jaal Tasfaaye: Goonni kun "Oromiyaa gabrummaaf kennuu irra, lubbuu kiyya dabarsee kennuun filadha!" jedheetu gootumaan wareegame Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Tasfaaye: Goonni kun “Oromiyaa gabrummaaf kennuu irra, lubbuu kiyya dabarsee kennuun filadha!” jedheetu gootumaan wareegame
Jaal Tasfaaye: Goonni kun “Oromiyaa gabrummaaf kennuu irra, lubbuu kiyya dabarsee kennuun filadha!” jedheetu gootumaan wareegame
Jaal Tasfaaye: Goonni kun “Oromiyaa gabrummaaf kennuu irra, lubbuu kiyya dabarsee kennuun filadha!” jedheetu gootumaan wareegame.
Jaal #Tasfaaye #Dabalii, jaala qaalii, ilma dantaa sabasaaf qananii jiruu ofii wareege. Xurree jaallawwan QBO dhiigaaf lafeen taraaranii nuun gayan iggitii itti tolchuu fi galiin ga’uuf imaanaa guddaa baatee moonaa QBO ABOn hoogganamu keessatti gahee isarraa eegamu akka warraaqaa warraaqsa sabaa oofuutti bahachaa tureera.
Egaa wareegama qabsoon feetu kennuufis akkuma irbuu seene, lola Gootichi WBO humna waraanaa goolessituu Wayyanee /EPRDF Godina sh/Lixaa Aanaa Cobii ganda Diggoo Dachaa keessa sakatta’insa WBOf Ooraalii lamaa fi 3F tokkoon sosso’aa jirtu irratti fudhatee Ooraalii 1 guutummaan daaressee, humna 3F irra turtes haleele irratti wareegameera.
Gootni sabaaf wareegame yoomillee onnee sabaa keessaa hin bayu. Sabaaf Seenaa biratti faarfamaa jiraata! Qabsaa’an ni kufa; qabsoon itti fufa!
Wake Up Oromo and Fighting back against the OPDO and G-7 Cadre’s ‘Fake News’ and Disinformation.
ROMOO KOO: Bilisummaa Qeerroon gatii qaaliitti nuufbitte ODP’n Ololola Siyaasaatiin Diinaatti Rakasaan gurgurachuuf jedha.